घण्टी बजाउनेको आवाज कसले सुनिदिने ? | Aaja ko Shiksha
घण्टी बजाउनेको आवाज कसले सुनिदिने ?
समाचार , फिचर
उहाँ हुनुहुन्छ, रामबहादुर पल्ली । गुल्मी जिल्लाको गुल्मीदरबार–१, बलिथुमस्थित थाक्सीपोखरा माविमा कार्यालय सहयोगी (पियन) का रुपमा २२ वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ । विद्यालयमा उहाँको नियुक्ति २०५४ साल कात्तिक १ गते भएको थियो ।
उहाँभन्दा अर्का कार्यालय सहयोगी अझ पुरानो हुनुहुन्छ । गुल्मीदरबार–२ जुभुङस्थित सूर्याेदय माविमा कार्यरत लोकबहादुर घर्तिले सेवा गर्नुभएको ३३ वर्ष बितेको छ । उहाँलाई विद्यालयले २०४३ साल माघ १६ गते नियुक्ति दिएको थियो ।
शनिबारबाहेक विद्यालयमा हरेक पिरियडमा घण्टी बजाउनु उहाँहरुको दैनिकी हो । अझ विद्यालय प्राङ्गण र प्रत्येक कक्षाकोठा सफा गर्नु कार्यालय सहयोगीहरुको खास काम हुन् । जीवनका उर्जाशील समय विद्यार्थीलाई समय सचेत पार्न र फोहर बढार्दै बित्यो । उहाँहरुले जागिर त खानुभयो तर धुलो र फोहर अनि समयले आफूलाई नै खाएको चाहिँ पत्तै भएन । यति गर्दा उहाँहरुमा एउटा आशाचाहिँ जीवितै थियो–जागिर छोडेका दिन रित्तो हात पक्कै हुने छैन । अझ नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत् विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा छोडेपछि दिने सुविधा व्यवस्था गरेपछि रामबहादुर पल्ली र लोकबहादुर घर्ति जस्ता हजारौं निम्न तहका कर्मचारी निकै उत्साही भए । सरकारले केही न केही पक्कै देला भन्ने आशा बढ्यो । तर, त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ । किनभने, ऐन त आयो तर नियमावली ल्याइएन । विद्यालय कर्मचारीहरु स्थायी प्रक्रियामा जाने र उनीहरुले जागिर छोड्दा पाउने सुविधासम्बन्धी उल्लिखित प्रावधानहरु ‘तोकिएबमोजिम’ लेखिएका छन् । तोकेबमोजिम भन्नु नियमावलीमा उल्लेख हुने प्रावधान हुन् ।
यतिबेला दुईतिहाई समर्थनको सरकार छ । तर, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिने शिक्षा नियमावली आउने टुङ्गो छैन । नियमावली ल्याउनुभन्दा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रचार गरियो तर अहिलेसम्म ऐन आउने छाँटकाँट छैन । रामबहादुर पल्ली भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो उमेर गइसक्यो, हाम्रो आवाज कसले सुनिदिने ? सरकारले दरबन्दी कायम गरिदिए स्थायी प्रक्रियामा जान पाइन्थ्यो र जागिर छोड्दा रित्तो हात घर फर्किनु पर्दैनथ्यो ।’
उमेर हदले हजारौं विद्यालय कर्मचारीले जागिर छोडे तर रित्तै हात । २०६७ सालमा ८ जना विद्यालय कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा जिते र तिनले प्राथमिक शिक्षकसरह पेन्सन बुझिरहेकै छन् । तर, अरु हजारौं विद्यालय कर्मचारी शिक्षा नियमावली नल्याइएकै कारण सुविधाबाट बञ्चित बनिरहेका छन् ।